विप्लव प्रतीक - कान्तिपुर समाचार
विप्लव प्रतीकका लेखहरु :
यस्तो हुन सक्छ र ?
नजाने संसारको कुनकुन प्रदेशउसकै मनखुसी डुल्दैडुल्दै,कहिले नदी, पहाड, जंगल र सागर छुँदैमायालुका केश फर्फराइदिँदैकेही थकित मानिसहरुलाई शीतल बाँड्दै मन्द पवन मछेउ आइपुगेको छसुवासको सौगात लिएर ।
हरेक कुराको अन्त्य निश्चित छ, जे रचित छ । प्रेमध्वज दाइलाई सम्झिँदा सम्झनाको कुनचाहिँ गाँठो फुकाएर सुरु गरूँ ? तर, योजनाअन्तर्गत सम्झना कहाँ आउँछ ? र, योजना बनाएर सम्झिनु पनि के सम्झिनु ?
पुस्तक पढ्ने मेरो बानी ‘कमर्शियल’ हिन्दी साहित्यबाट सुरु भएको हो । तिनबाट म हिन्दी जासुसी उपन्यासको कक्षामा उक्लिएँ । तर, साहित्यसागरको रसपान गर्ने मेरो यात्रा त्यत्तिकैमा सीमित रहेन । कुन्नि कुन स्रोतबाट हिन्दीमा अनुवादित रुसी साहित्यको निकट पुगेँ । निकोलाई आस्त्रोभ्स्की, टोल्सटोय, दोस्तोएभ्स्की, चेखभ, इभान तुर्गनेभ र पुश्किनका किताब पढेपछि मैले फर्केर पनि हेरिनँ ती जासुसी र सामाजिक भनिने हिन्दी उपन्यासतर्फ । तर, तिनले पढ्ने बानी लगाएको गुन भने अहिले पनि बिर्सिएको छैन ।
मनमा बलिरहेको सम्झनाको मधुरो दियो
म थिएँ र यौटा साइकल थियो ।सिलुएटमा मैले डोर्‍याइरहेको साइकल र मेरो आकृतियतिखेर मेरो सम्झनाको क्यानभासमा कोरिएको छ ।
लुइस ग्लुकले यसपल्ट साहित्य विधामा नोबेल पुरस्कार पाइन् । साहित्यमा गरिमामयी मानिने पुरस्कार । मलाई विश्वास छ, ग्लुक भने पुरस्कार वा सम्मान होइन, नौलो कविताको खोजीमा रहेकी हुनुपर्छ ।
रत्नशमशेर थापा अर्थात् मेरा निम्ति रत्न दाइ भन्नेबित्तिकै अधिकांश नेपाली श्रोतालाई अनायास सम्झना आउने गीत हो– ‘घुम्तीमा नआऊ है’ । यो गीत रेडियोमा घन्किन थालेपछि तन्नेरीहरूले आफ्नो मनको आवाज भेटे, रत्नशमशेरका भाव र प्रेमध्वजको आवाजमा ।
बाल्यकालमा स्कुल पढ्दा एउटा नाटकमा मुख्य भूमिका पाएको थिएँ । रिहर्सल एक महिना चल्यो । प्रदर्शन हुन पाएन । त्यसको धेरै वर्षपछि राष्ट्रिय नाचघरमा दाइ हरिप्रसाद रिमालले ‘श्रीकृष्ण चरित्र’ मा मुख्य भूमिका दिनुहुने भयो । त्यो नाटक कहिल्यै बनेन । अब भने नाटक खेल्ने लालसा जाग्यो । अनेक प्रयासपछि संगीतकार गणेशप्रसाद श्रेष्ठले बनाउनुभएको ‘निर्वाण मार्ग’ मा भूमिका पाइयो, मन्त्रीको ।